NOOCYADA COLONIFORM EE GEEDAHA TUFAAXA IYO KUWA KALE EE SII KORDHAYA EE URAL: CAJI, JIILAAL, XAGAAGA, HORE, DAYRTA, MELBA, LOBO, SPARTAN, SAWIR - BEERTA
Kala duwan ee kala duwan ee geedaha tufaaxa ah ee sii kordhaya ee Ural: jiilaalka iyo hore, columnar iyo cumber
Tufaaxu waa midka ugu caansan uguna wanaagsan ee adduunka. Dhirta dhirtu waxay ku koraan meel kasta, sababtoo ah noocyada kala duwan ee noocyada waxay suurtogal u tahay inay doortaan geedo aag juqraafi ah.
Urarrada, inkastoo ay ka fog tahay cimilada khafiifka ah, ayaa diyaar u ah in ay sii kordhaan inta badan, inkastoo ay lagama maarmaan tahay in si taxadar leh loo doorto, iyada oo la tixgelinayo waxyaabaha gaarka ah ee injineerrada beeraha iyo iska caabinta arrimo taban.
Inta badan ku habboon noocyada kala duwan ee geedaha tufaaxa ah ee uurjiifka Ural, si gaar ah loogu talagalay aagga cimilada this, inkasta oo kuwa kale waxaad sidoo kale dooran kartaa noocyo wanaagsan dhalidda wanaagsan.
Nooc kala duwan
Guud ahaan waxaa jira ilaa 10,000 oo noocyo adduunka ah, oo la soo saaray sanado kala duwan, laakiin kaliya in ka yar 100 ayaa ku habboon gobolka Ural.
Markaad dooranayso, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso oo ka mid ah arrimo kale iyo goobta goobta.
Intaa waxaa dheer, waa inaad ogaataa in ay jiraan saddex qaybood oo kala duwan, waxay ku kala duwan yihiin marka la eego bilowga fruiting:
skullfruit - bilaw inaad bixiso dalag 4 sano oo nolosha ah;
dhexdhexaad ah - bilaabaan inay midho u dhashaan 7 sano ka dib marka la beerto;
miraha goor dambe - Fruiting waxaa la filayaa 10 sano.
Kuwa ugu caansan oo ku habboon Ural waa noocyo ay abuuraan Saaxiibayaal ka soo jeeda Sverdlovsk, iyo sidoo kale kuwo kale oo gudaha iyo dibadda ah.
Dhammaantood waxaa loo qaybin karaa saddex kooxood oo kala duwan: xagaaga, dayrta iyo jiilaalka.
Bannaanka u khibrad leh waxay ku talinayaan marka ay dooranayaan in ay u hoggaansamaan saamigaan - 20% geedo xagaaga, 20% xilliga dayrta iyo 60% noocyada jiilaalka.
Qeyb ka mid ah, goosashada waxay noqon doontaa mid wanaagsan xitaa xaaladaha adag oo ay suurtagal tahay in ay bixiso tufaaxa qoyska muddo dheer.
Kala duwanaantan ayaa leh qaybta jiilaalka, kuwaas oo miraha la kaydin karo muddo dheer, waxaana la cuni karaa keliya xilliga qaboobaha, marka fitamiinada ay aad muhiim u tahay.
Geedaha kala duwan Faransiis celceliska celceliska, si fiican u dulqaadan -40 heerka Celsius iyo siin dalag weyn. Tufaaxyadani waa kuwo ballaadhan oo dhadhan-macaan, oo udambeeya, waxay jecel yihiin carruurta.
Lovers of crunchy tufaaxu waxay qadarin doontaa miraha beeraha ee daadiya horaantii Sebtembar, waxaa la kaydin karaa ilaa March iyo xitaa ka badan, haddii aad u hoggaansamayso xaaladaha kaydinta.
Beeralayda doorta noocyada kala duwan waa in ay ka warqabaan in cimilada roobka ee dheeraadka ah ay u horseedi karto jirro xannibaad iyo qaadashada tallaabooyin ka hortag ah wakhtiga.
Sida caadiga ah kolchatki, mararka qaarkood laamihii sannadkii hore, midho u dhali, sidaas darteed, formation of taajka waa in si taxaddar leh loo fuliyaa.
Dhirta Maydh waxay leeyihiin muuqaalo dhowr dabeecadood oo dibedda ah, si ay u ogaadaan sharaxaadda tufaaxa iyo noocyada kala duwan ee ugu baahida Ural, way adagtahay in la isku kalsoonaado kala duwanaanshahan dadka kale.
Taajka geeduhu wuxuu u eg yahay kubad muuqaal ah, geedaha qudhuna waxay yihiin dherer dhexdhexaad ah, waxay leeyihiin caleemo cagaaran oo leh caleemo qallalan oo ku wareegsan.
Haddii Maydh dhirta ciidda si fiican loo bacrimiyey, tufaaxuna waxay noqon doontaa mid dhexdhexaad ah, miisaankeedu yahay 100 g, iyo carrada ciriiriga ah tufaaxu wuxuu noqonayaa mid yar.
Taajka geedku wuxuu ka kooban yahay laamo siman, kuwaas oo ku dhawaad ​​xagasha 90 digrii. Muuqaalka midhaha wuxuu noqon karaa lafaha da'aha kala duwan, kolchatkah ama koritaanka.
Tufaaxa ayaa inta badan lagu soo koobay muuqaal, oo leh dusha sare ee quruxda badan daboolay fara badan. Kala duwanaantu waa mid hore, dalagana waa la goyn karaa badhtamaha bisha dhexdeeda, laakiin ma aha mid ku haboon kaydinta muddada dheer.
Kala duwanaanta tufaaxa ayaa leh qaybta dayrta, waxaa loo adeegsaday beerista Machadka Cilmi baarista ee Siberia, waxaana loo qaybiyey tan iyo 1978. Dhirta dhererkoodu ma aha mid aad u dheer, halkii, dherer dhexdhexaad ah, waxay leeyihiin taaj mid ah oo u eg qaabka loo yaqaan oval.
Miraha Altai kadhac yar yar ee miisaanka iyo miisaanka, kaliya 40-50 g, laakiin jidhkooda waa mid aad u casiir leh oo uu leeyahay dhadhan macaan oo leh dushiisa la dareemi karo. Miraha waa huruud marka ugu horeysa, ka dibna midabka ayaa lagu beddelaa guduud mugdi ah, oo leh ubaxyo nadiif ah.
Waxaad ku soo ururin kartaa tobanka sanno ee Agoosto, noloshooda shafka waa ilaa 2 bilood. Waxaa muhiim ah in aadan seegin bilowga ururinta, sababtoo ah marka miraha la qubey.
Kala duwan ayaa ku habboon in ay ku tarmaan dhammaan meelaha Ural, sababtoo ah waxay u adkaysataa kareemka iyo heerkul hooseeya.
Kala sooc Ural badan ku baahsan Urallooyinka oo dhan, waa dayrta. Ural badan bannaanka loo yaqaan tan iyo 1959 oo waa skoroplodnym, tan iyo beergooyska laga filan karo horaantii sida 3 sano ka dib markii laga beerto.
Kala duwan ayaa ku farxi doonta kuwa jecel in ay tijaabiyaan ayna ku hawlan yihiin xulasho, maxaa yeelay waxaad ka abuuri kartaa Beelaha u dhaxeeya difaaca weyn.
Geedku wuxuu leeyahay qaab isku dhafan, taajka wareega ee cufan wuxuu cufan yahay, iyo fruiting waxay dhacdaa sanadihii hore, sariiro miro ah iyo xataa xayawaanno.
Miraha Ural badan ha miisaan culus, waxayna ku habboon yihiin nooc kasta oo wax lagu shaqeyn karo. Beergooyska waxaa la dhigaa muddo dheer, illaa 50-60 maalmood.
Welsey iyo kuwo kale
Welsey - Abuuritaanka xulashada Ameerika, ee liiska noocyada dhirta tufaaxa, waxay ku taallaa mid ka mid ah meelaha ugu horreeya, iyada oo ay ugu wacan tahay iska-caabbinta khaaska ah ee dhaawaca maskaxda.
Ka muuqatay Welsey Back in 1860, weli waa mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan ee tufaax ee wax soo saarka casiir.
Tufaaxadani waxay leeyihiin hal muuqaal: Dhadhanka si toos ah ayey ugu tiirsan tahay xaaladaha cimilada, iyo sida ay u wanaagsan yihiin, kuwa ugu badan ee beergooyska iyo dhadhanka fiican.
Geedaha koraan ee dherer dhexdhexaad ah, laakiin meesha ay laamaheeda ee xagal ba'an ku yimaada jirku waxay badanaa u horseedaa inay jebiyaan culayska miro.
Muuqaal kale noocyo waa in xitaa goor dambe la goosashada maalmo badan waxay keenaysaa dayrta miraha, taasina waxay saameysaa xaaladdooda inta lagu jiro kaydinta. Isla mar ahaantaana, tufaaxu waxay hore u bislaadaan, dhirtuna waxay u adkeysanayaan qolof, taas oo muhiim ah haddii hawadu qoyan tahay.
Si wadajir ah ula socda liiska Ural, koraan iyo noocyo cusub oo ah geedo tufaax ah, tusaale ahaan, Guriga dalkataas oo kaliya ma aha adkaysi u qolof, laakiin sidoo kale waa skoroplodny iyo jiilaalka-adag. Miraha midabkiisu waa cagaar leh midabka cagaaran, mid aad u dhadhan leh, macaan leh dufasho, miisaankuna wuxuu gaaraa 100 g.
Waxaa jira noocyo duq ah - Paping ama Carolkuwaas oo sidoo kale adag tahay jiilaalka.
Ka akhri daryeelka xanaanada guriga for geraniums.
Geedka geedka geed - sawirro oo qiimahoodu muuqaal yihiin.
Macluumaad faa'iido leh oo loogu talagalay dadka daryeesha biyaha ku xirnaanta aasaaska gurigaaga.
Cajiibka iyo qoraalka
Dhirta tufaaxa ee dwarf waxay ka duwan yihiin kuwa kale in koritaankooda ay ku kooban tahay 2, marar dhif ah 3 mitir. Inta badan noocyada kuwan waa jiilaalka-adag iyo aad u badan.
Sababtoo ah xaddidaadda koritaanka, miraha ay aad u ballaaran yihiin oo tastier, iyo fruiting ayaa suurtagal ah mar hore 2 sano tallaalka ka dib. Ciidda for noocyada noocan oo kale ah waa in si fiican u bacrimiyey iyo nafaqo leh.
Koraaya geedaha tufaaxa ee hooseeya ayaa siiya faa'iidooyinka soo socda ee korriinka:
santuuqa sare iyo waqti isku mid ah - dhadhanka sare;
sahlanaanta daryeelka iyo talaabooyinka ilaalinta;
awoodda ay ku koraan xitaa meelaha dhulka hoostiisa ku yaal meel u dhow dusha sare;
Bannaanka u badani waxay isku kalsoon yihiin noocyada stantium iyo dhirta ku koray on rootstocks koobi, laakiin tani ma aha wax la mid ah.
Dhirta xuduudaha waa geedo, kuwaas oo kobcitaanku waa mid xadidan, taajka waxaa la sameeyaa kobcinta iyo barbarro dhulka.
Dhirta noocan oo kale ah ayaa si sahlan u dhaafi kara barafka iyagoo aan cabsi qaboobin. Si stantsevym waxaa ku jira noocyo kala duwan oo loo yaqaan 'Breun Mazunin': Wonderful, Degay, Stantose xilliga dayrta, Barafka iyo kuwa kale.
Waxay leeyihiin miro badan oo dhadhan fiican leh, inta badanna waa noocyo xagaaga ah, taas oo waliba ay tahay jiilaalka-adag.
Muuqaal khaas ah - dhammaan tarjumayaasha waxay ubaahan yihiin tikidhada, garters iyo manjooyin joogto ah si ay u sameeyaan taajkii. Mid ka mid ah noocyo Bisaylkiisa hore ee geedaha tufaaxa - Melba, wuxuu siinayaa dalag geed ka mid ah ilaa 200 kg oo ah miraha waaweyn.
Dhirta Coloniform waxay ogaanayaan suurtagalnimada in la beero isweydaarsi degaan yar. Nasiib darro, Ural waa tan halka faa'iidadooda ay ku dhowyihiin.
Waaya-aragnimada muddada dheer ee bannaanka iyo kuwa curyaamiinta ah ayaa muujiyay in xitaa noocyada hore ee geedka hore ee geedka-geedaha aan ku habbooneynin sii kordhaya Ural muddo dheer.
Tani waxaa lagu sharaxay xaqiiqda ah in midkoodna uusan ku dhicin adkaysiga qaboobaha ee lagama maarmaanka ah iyo inta badan wuxuu ku yareeyaa xididdada.
Dhirta tufaaxa ah ee dhirta lagu qurxiyo waa la kobcin karaa, qoob ka qaadi karaa dhulka jiilaalka iyo daboolista, laakiin tan waxaa la samayn karaa oo keliya dhowr sano. Haddii kelyuhu ay barafoobaan oo ay jaraan, ka dibna laamuhu waxay bilaabaan inay koraan, sameynta taajkii caadiga ahaa ee timaha.
Of noocyo cusub ayaa la aqoonsan karaa, laga yaabee, skoroplodny Sweet Wikic oo leh miraha waaweyn.
Cadaadiska baraf hooseeya
Dhammaan geedaha tufaaxa xayawaanka ah waxaa loo tixgeliyaa in ay yihiin kuwo aan u adkaysnayn, iyo sidoo kale kuwa u adkeysan kara heerkulka sida ugu hooseeya -25 heerka Celsius. Aan ahayn noocyo badan oo la mid ah ayaa lagu kori karaa Ural, inkastoo ay aad u baahanyihiin gobolo kale.
Tusaale ahaan, fasalka Lobo oo loo rarey Kanada, waxa fiican in la koro qaabka nuuca. Miraha waxay u bislaadaan xilliga dayrta waxaana lagu kaydin karaa ilaa 2 bilood, waxay leeyihiin jaale leh midabka casaan cas.
Kala duwanaanshaha la aqbali karo waa Spartan, waxaa lagu gartaa Bisaylkiisa dambe iyo miraha waaweyn, miisaankoodu gaaro 200 g. Kala duwanaanta noocaas ah waxay u adkeysaneysaa qolof iyo jahwareer weyn.
Waxay leedahay sifooyin isku mid ah iyo CelliniDhirta tufaaxa kuwan ayaa si fiican u koray kuwa ku nool aagagga Ural leh jiilaal khafiif ah.
Dhexdhexaad u adkaysta
Qaar ka mid ah noocyo dhowr ah ayaa hoos u galay category this, iyo inkasta oo ay tahay mid aad u adag tahay in ay iyaga ku koraan ka badan noocyo yar u adkaysta, waxay yihiin kuwo aad u caan ah ee bannaanka u.
Noocyada noocaas ah ayaa dalbanaya ciid, samaynta taajka, sababtoo ah waxay u baahan yihiin kuleyl badan. Dhexdhexaad u adkaysta waa Stroev oo leh miraha waaweyn iyo iska caabin adag, Antonovka - mid ka mid ah noocyada ugu caansan, isagoo leh wax ka badan noocyo daraasad. Miro ay leedahay dhadhan oo ay adagtahay in lagu wareero cid kale, iyo dhalidda waa mid aad u sareysa.
Ma aha oo kaliya jiilaalka, laakiin sidoo kale noocyo hore ee geedaha tufaax ee ma aha oo kaliya gudaha, laakiin sidoo kale xulashada shisheeye ka mid ah kuwa dhexe u adkaysta. Xagga guryaha waxaa lagu aqoonsan karaa sida:
Quruxda Sverdlovsk iyo kuwa kale
Waa hagaag, iyo noocyada shisheeye, noocyada tufaaxa sida Jonathantaas oo u adkeysaneysa qolof iyo abaar, hase yeeshee mar walba kama hor istaagi karo xayrta budada ah, miraha midigeeda waxaa lagu kaydin karaa ilaa 6 bilood.
Kala duwanaanta tufaax ee qof walba Idared awood u leh in ay u adkeystaan ​​ku dhowaad dhammaan cudurada, siinayaa dhalid joogto ah iyo miraha dhadhan fiican leh, kaas oo sidoo kale lagu kaydin karaa ilaa 7 bilood.
Awood u leh inuu u dulqaato qabow daran
Waxaa laga yaabaa in qaybta ugu caansan ee noocyada kala duwan ee koray meelaha ugu kala duwan ee Ural waa jiilaalka-adag. Waxay u adkeysan karaan heerkulka cimilada dheeraadka ah ilaa -40 digrii.
Mid ka mid ah noocyo ugu yar u qabow u adkaysta ee tufaax waa SverdlovskMiraha midabkeedu waa jaalaha ah, dillaacaan bisha Sebtembar waxaana lagu kaydin karaa ilaa dhammaadka jiilaalka.
Laga soo bilaabo kala duwan ee Bisaylkiisa dayrta ayaa lagu kala saari karaa sare-dhalidda Sucuudiga deyrtataas oo lagu tilmaamayo iska caabin si loo kabo.
Liis kasta oo noocyo tufaax ah ayaa sidoo kale ku jira noocyada xilliga qaboobaha iyo jiilaalka: Summer xagaaga, Maydh, Uralochka - goosashadooda waxaa laga saari karaa dhammaadka bisha Ogost, inkastoo lagu kaydiyo dhowr toddobaad oo keliya. Noocyadaasi waxay ku habboon yihiin beerashada meelaha ku yaalla waqooyiga Ural.
Xaaladaha cimilada Ural ah oo aad u xun, "xagaaga" waxaa loo yaqaannaa noocyada tufaaxa, miraha taas oo ah, inkasta oo ay ku bislaadaan geed, waxay leeyihiin nolol xaddidan. Way wanaagsan yihiin inay ku raaxaystaan ​​tufaaxda ugu horeysa, hel qaybta xagaaga ee fitamiinada.
Qaar badan oo ka mid ah ma aha mid aad u ballaaran, laakiin dhadhan fiican, tusaale ahaan, Uktus udgoon wuxuu leeyahay dhadhan macaan oo leh macaan, laakiin Papyolanta ma aha oo kaliya waxay bixisaa miraha aad u kareysan oo dhadhan fiican leh, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay dabool aan la garanayn, oo muhiim u ah dadka qaba xasaasiyadda.
Wuxuu u eg yahay noocyo kala duwan Guriga dalka, oo aad u caan ah gobolka Ural, sida jiilaalka-adag iyo dhexdhexaad ah. Miraha ay diyaar u yihiin in ay wax cunaan bartamihii August, waxay sidoo kale yihiin kuwo aan lahayn iyo aad u macaan.
Kala duwan kasta oo dooran leh ninkii beerta ka shaqaynayay, waxaa lagama maarmaan ah in la waafajiyo shuruudaha beerashada iyo ka dibna wax-soo-saarka wanaagsan waa la damaanad qaadi doonaa.